ဦးနှောက်အာရုံကြောကျန်းမာရေး » လေဖြတ်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း
ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မှိုစွဲရောဂါ ကြောင့် မျက်နှာ ခွဲစိတ်တာ၊ မျက်လုံးထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကို ကြားဖူးမှာပါ။မှိုစွဲရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဩဂုတ် 25, 2021 .3mins read
ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် ကျန်းမာတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးပြုနိုင်လို့လဲ။ ဘာတွေ စားသောက်ရမလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ မတ် 10, 2021 .2mins read
ရေဓာတ်ခန်းခြောက် ခြင်းက လူတိုင်းအတွက် မကောင်းပေမယ့် ဆီးချို နဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတွေအတွက် ထိခိုက်မှုက ပိုများပါတယ်။ သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။